नेपालको लक्ष्य मलेसियामाथि ऐतिहासिक क्लिनस्वीप ! | Hamro Khelkud
नेपालको लक्ष्य मलेसियामाथि ऐतिहासिक क्लिनस्वीप !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसिया टी ट्वान्टी विश्वकप छनोट अघि मलेसियामा प्रशिक्षणमा व्यस्त छ ।
सोमपाल कामी प्रशिक्षणका क्रममा । तस्बिर सौजन्य : क्रिकेटिङ नेपाल डट कम
जुलाई २० देखी २८ सम्म सिंगापुरमा हुने एसिया टी ट्वान्टी विश्वकप छनोट अघि विशेष प्रशिक्षणको लागि नेपाली टोली गत मंगलबार मलेसिया प्रस्थान गरेको थियो । नेपाली टोली उतैबाट सिंगापुर जाने कार्यक्रम छ । नेपालले शनिबार र आइतबार मलेसियासँग दुई अन्तर्राष्ट्रिय टि ट्वान्टी सिरिज खेल्ने छ । दुबै खेल किनारारा ओभल क्रिकेट मैदानमा विहान ७ : ४५ पछि सुरु हुने छ ।
मलेसिया नेपाल भन्दा तुलानात्मक रुपमा कमजोर टोली हो । त्यसैले यस सिरिजमा नेपाललाई नयाँ इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर छ । नेपालको लक्ष्य पहिलो पटक टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने देखिन्छ । नेपालले हालसम्म ४ अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी सिरिज खेलेको छ । २ सिरिजमा पराजित हुँदा १ मा जित र १ बराबरी नतिजा निकालेको छ ।
सन् २०१५ मा श्रीलंकामा हङकङसँगको पाँच टी ट्वान्टी सिरिज वर्षाको कारण ४ खेल रद्द हुँदा १-०ले हारेको थियो । सन् २०१५ मै ग्लोवल विश्वकप छनोट अघि नेदरल्यान्डसँगको चार टी ट्वान्टी सिरिज ३-१ ले गुमाउन पुग्यो । गतवर्ष लर्ड्समा नेपाल, एमसीसी र नेदरल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक टी ट्वान्टी सिरिज नेदरल्यान्डसँग बाँडेको थियो ।
शरद भेषावकर प्रशिक्षणका क्रममा । तस्बिर सौजन्य : क्रिकेटिङ नेपाल डट कम
नेपालले गत माघमा यूएईलाई २–१ ले हराउँदै पहिलो ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी सिरिज जितेको थियो । त्यस सिरिज जितेको झण्डै ६ महिना पछि नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै छ । प्रतिस्पर्धि हेर्दा नेपाललाई कुनै कठिन पनि देखिदैन ।
यू१९ टोलीका रोहित कुमार पौडेल र पवन सरार्फ एसीसी यू१९ इस्टर्न रिजनपछि उतैबाट टोलीमा समावेश भएका छन् । नेपाल २० जुलाईमा सिंगापुर जाने छ । नेपालले एसिया टी ट्वान्टी छनोटको उपाधि जित्न सके अक्टोबरमा हुने ग्लोबल विश्वकप छनोटको लागि छानिने छ ।